Xoogag – Armour Healthcare Services Inc. |
Shariif Xasan oo wax laga xumaado ku tilmaamay safarkii shalay lagu joojiyay Xildhibaanadii ka dhoofi lahaa Garoonka Diyaaradaha ee Aadan cade.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan si kulul uga hadlay tallaabadii shalay lagu hor istaagay Xildhibaano gaaraya Afartameeyo, kuwaasoo ka dhoofi lahaa Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Shariif Xasan oo shir jaraa’id ku qabtay Xafiiskiisa ayaa ka jawaabay tallaabadii lagu joojiyay safarkii Xildhibaanada isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay falkaas, waxaana uu sheegay in aanay sharci aheyn.
Waxaa aad iyo aad uga xumahay dhacdadii shalay ka dhacday Air Porka Muqdisho, ee lagu joojiyay Xildhibaano howlo shaqo u socday iyo kuwo caafimaad u socday, oo waliba qaarkood ahaa kuwa daran”ayuu yiri Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Shariif Xasan ayaa ku baaqay in sharciga la dhowro, isagoo Hey’adaha dastuuriga ku wargeliyay in Hey’ad walba ay sharcigeeda lagu dhowro.
Waxaan soo jeedinayaa in sharciga la dhowro, Hey’adaha dastuuriga in Hey’ad walba ay sharcigeeda ku dhowrto, wixii shalay dhacay ma ahan nidaam Dowladinimada iyo xoriyada ka turjumaya, waana arrin meel looga dhacay sumacada Xildhibaanimada iyo tan soomaalinimada”ayuu sii raaciyay Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Shariifka ayaa sidoo kale soo qaatay in Xildhibaanada qaar garoonka dhexdiisa lagu jiiday, taasoo uu qeexay inay aheyd xad gudub iyo inay aheyd mid hareer marsan sharciga Dowliga sida uu yiri.
Anaga diyaar uma nihin in qalad qalad kale lagu saxo, wixii dhacay waa dhaceen, waxaa soo jeedineynaa in aysan mar dambe dhicin”ayuu yiri Shariif Xasan oo hadalkiisa ka muuqatay degenaan.
Ugu dambeyn Shariifka ayaa ku taliyay in sharciga la dhowro, isla markaana Axdiga KMG lala raaco wixii la dhigtay, isagoo sheegay in dhibaatooyin badan ay dhacayaan hadii sharciga lagu xadgudbo, isagoo xusay in waxyaabaha iminka jira ay ka dhasheen, sharciga oo lagu xadgudbay, waxaana uu ka digay in arrimahan ay sii socdaan.
Next Next post: Soma milligrams » enter approved canadian rx main page – soma milligrams